40 Madfac oo lala helay Saldhigyada ciidamada huwanta ee deegaanka Bariire.
Shiinaha oo qarka usaaran in uu Mareykanka kala wareego hoggaaminta Caalamka [Video+Warbixin]
Ciidamo katirsan Maamulka Puntland oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Galgala.
Wednesday May 16, 2018 - 14:27:59 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya Galbeedka Afghanistan ayaa sheegaya in magaalada Farah ee xarunta gobolka Farah ay duullaan ballaaran kala kulantay ciidamada Mujaahidiinta Imaaradka Islaamiga ah.
Guddoomiyaha Gobolka Farah uqaabilsan xukuumadda dabadhilifka Afghanistan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalyahannada Taliban ay la wareegeen dhowr xaafadood oo katirsan magaalada walina ay socdaan dagaallo culus.
Goob jooge ku sugan magaalada Farah ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayaan jugta qaraxyo waaweyn iyo madaafiic lays dhaafsanayo, aroornimadii hore ee saaka ayay xoogaga Taliban waxay daah fureen duullaankan ballaaran oo ay ku doonayaan in ay qabsadaan magaalada Farah oo kaabiga ku heysa xuduud beenaadka wadanka Iiraan.
Dhinaca kale dagaallo culus kadib ayay ciidamada Taliban waxay qabsadeen mid kamida degmooyinka gobolka Badkhashaan waxayna weeraradan qeyb ka yihiin howlgallada Alkhandaq ee xilliga Guga wuxuuna hadafku yahay in dhul hor leh laga xureeyo gacanta isbaheysiga NATO iyo Maleeshiyaadka dabadhilifyada ah.
3 katirsan ciidamada Dowladda oo si yaab leh loogu dilay deegaanka Sabiid ee duleedk Afgooye.
Sawirro: Askarigii 117aad oo Mareykanka looga dilay Afghanistan iyo Talibaan oo Mucaskar soo xirtay
Sarkaal katirsanaa ilaalada Madaxtooyada oo lagu dilay degmada Yaaqshiid.
65 katirsan Saraakiisha Booliska Kenya oo sanadkii hore lagu dilay dhulka NFD.